दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशियो
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ असोज १९ शुक्रबार |
सुरेश राउत, काठमाडौं, १९ असोज । नेपालीहरुको महान् चाड दशैँतिहार तथा छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्य सामग्रीहरुको मूल्य अस्वाभाविक रुपले बढेको छ । नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालय र विभिन्न सम्बन्धित निकायहरुको बदनियतको कारण धेरैजसो समयका बजारभाउ बढ्ने गरेको उपभोक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
अहिले विशेष गरी तेल, चिनी, मैदा आँटालगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको छ । साल्ट ट्रेडिङले ७६ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेचिरहेको चिनी युआर मेसेनरी एण्ड सप्लायर्स प्रालिले ८१ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतिकिलो रुपैयाँमा बिक्रीवितरण गरिरहेको छ ।
चिनीको मूल्य प्रतिक्विन्टल छ हजार दुई सयबाट बढेर सात हजार एक सय पुगेको छ भने थोक पसलमा छ हजार तीन सयबाट बढेर सात हजार दुई सय पुगेको छ । खुद्रा पसलमा भने चिनीको मूल्य ७० रुपैयाँबाट बढेर ८२ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
त्यस्तै मैदा ज्ञान प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँबाट बढेर ५५ रुपैयाँमा, ज्ञान आँटा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँबाट बढेर ५० रुपैयाँ पुगेको छ । भटमासको तेल प्रतिलिटर एक सय २३ रुपैयाँबाट बढेर एक सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
सनफ्लावर एक सय ४५ रुपैयाँ प्रतिलिटरबाट बढेर एक सय ६० रुपैयाँ, काँचो तोरीको तेल एक सय ५० रुपैयाँ प्रतिलिटरबाट बढेर एक सय ५८ रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै चामलमा प्रतिबोरा (२५ किलो)को एक सय रुपैयाँ र दाल तथा गेडागुडीमा प्रतिबोरा (२५ किलो)को एक सय ५० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि भएको छ । डलरको भाउ बढेको कारण देखाउँदै खाद्य पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरिएको पाइएको छ । सरकारले बढेको डलर भाउमा कच्चा पदार्थ इम्पोर्ट गरिसकेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन तथा खोजीनीति भने गर्नसकेको छैन ।
बजार अनुगमनका नाममा केही खुद्रा पसलमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले अनुगमन गरेपछि त्यसको प्रभाव उपभोक्तामा पर्नसकेको छैन ।
नजिकिँदै गरेको चाडपर्वको बेलामा बजार भाउ आकाशिँदै गएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले बजारमा देखिएको चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि एवं अभावसम्बन्धी अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सांसद् लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको हो । समितिमा सांसद् प्रदीप यादव, पार्वता डिसी चौधरी, प्रेम आले र चन्दा चौधरी रहेका छन् । उपसमितिलाई सो विषयमा अध्ययन गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताको समयसीमा दिइएको छ । बैठकले चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलो नै निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
समितिको बैठकमा सांसद्हरुले चाडपर्वको मुखमा चिनीलगायत दाल, तेल, तरकारी एवं पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै बजारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले सरकारले चिनीको बजार मूल्य ६३ रुपैयाँभन्दा माथि नजाने भन्दाभन्दै अहिले के कारणले ८० रुपैयाँ माथि पुग्यो ?
भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए । साथै सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । सांसद् प्रदीप यादवले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै उखु किसानले अहिलेसम्म आफ्नो उखुको मूल्य नपाएको बताए ।
सांसद् राजेन्द्र केसीले एक हप्ताको बीचमा चिनीमा मात्र प्रतिकिलो १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको भन्दै चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुँदा कसरी सुखी नेपाली हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न गरे । सांसद् हृदयेश त्रिपाठी र विरोध खतिवडाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । आर्थिक दैनिकका साथमा ।